IIKHABHATHI ZEKHITSHI ZALE MIHLA (ISIKHOKELO SOYILO LOKUGCINA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iikhabhathi zekhitshi zale mihla (Isikhokelo soYilo lokuGcina)
Iikhabhathi zekhitshi zale mihla (Isikhokelo soYilo lokuGcina)
Wamkelekile kwigalari yethu yeekhabinethi zekhitshi zangoku ezibonisa izimbo, imibala, izixhobo zekhompyutha kunye noyilo.
Ixesha langoku libandakanya izinto ezininzi xa kufikwa kuyilo lwangaphakathi. Ngokubanzi, inokuthetha into ekhoyo ngoku, eqhubekayo kunye nemveli encinci. Ngokukhawuleza sicinga ukuba ibhekisa kwinto esexesheni, kodwa enyanisweni, isitayile sangoku senziwa ngeendlela ezahlukeneyo zokukhuthaza ezivela kumaxesha ahlukeneyo ngexesha.
Uyilo lwala maxesha luqale ekupheleni kweminyaka yoo-1800 xa intshukumo ye-Modernism ityhutyha isiJamani saseBauhaus School of Design. Ifumene ukuthandwa ekuqaleni kwenkulungwane yama-20, yiyo loo nto ikwabizwa ngokuba kuyilo lwangoku lwenkulungwane. Olu hlobo lubandakanya ukulula kunye nomsebenzi.
Amaxesha ngamaxesha, igama langoku libuye lidideke negama langoku, kwaye nangona ezi zimbini zinokusetyenziswa ngokuchaseneyo, ezi zahluke ngokupheleleyo xa kufikwa kwiimpawu zorhwebo kuyilo kunye nesitayile. Uyilo lwala maxesha lususela kwiminyaka yoo-1920 ukuya koo-1950, ngeli lixa uyilo lwangoku lubhekisa kwinto eqhubekayo ngoku, ngoku okanye esele ikho. Uyilo lwala maxesha lulandela inkangeleko engqongqo, ngelixa langoku ngamanye amaxesha kunokuba yinto eclectic njengoko iboleka inkuthazo kumaxesha ahlukeneyo kunye nezitayile zexesha.
Umbono ofanayo uya kuyilo lwekhitshi. Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje lulandela ujongano olungqongqo oluncitshisiweyo, olucocekileyo nolungahombiswanga. Esi sibheno sihle kunye nesezimboni siboniswa ngokuthe ngqo kuyilo lwekhabhathi zekhitshi zale mihla.
Apha ngezantsi sijonga ezinye zeempawu eziphambili zoyilo lweekhabhathi zekhitshi zanamhlanje zokukunceda uthathe isigqibo sokuba ngaba ubuhle babo obuhle be-aesthetics bulungile kwindlu yakho. (Ndwendwela eli phepha ukubona uluhlu lwethu olupheleleyo lwe Izimvo zekhabhinethi yasekhitshini )
Uyilo lweKhabhinethi yanamhlanje
Iminyango yeKhabinethi yeKhabhinethi yanamhlanje
Izinto zokwakha iikhabhathi zekhitshi zangoku
Ukugqitywa kweeKhabinethi zekhitshi zale mihla
Isixhobo sekhabhinethi sezixhobo zangoku
Ukugqitywa kwezixhobo zeKhabinethi zale mihla
Imibala yeeKhabinethi zekhitshi zale mihla
Iingcamango zeKhabhinethi zangoku
Iikhabhathi eziMhlophe zaMandulo eziMhlophe
Iikhabhathi eziMnyama zaMnyama eziMnyama
Iikhabhathi Zesiko Zangoku
Iikhabhathi eziNcinci zaleKhitshi
Iikhabhathi zeKhitshi zaMatye zale mihla
Indlela yokwenza iikhabhathi ezindala ziJonge zale mihla
Indlela yokwenza iikhabhathi ze-Oak ziJonge zale mihla
Abavelisi beKhabinethi beKhabhinethi yanamhlanje
Uyilo lwekhabhathi yekhitshi lwanamhlanje luthanda indawo egudileyo egudileyo, iifom zejometri ezinesibindi, imigca ebukhali kwaye akukho nto yokuhombisa kwaye oku kubonakala ngezinto ezahlukeneyo zoyilo, kubandakanya iikhabhathi zasekhitshini.
Iikhabhathi zekhitshi zale mihla zibonisa ngokuthe ngqo ubume beempawu zoyilo kunye neempawu zophawu loyilo lwangoku. Zilula kakhulu, kodwa zibeka ipremiyamu ekusebenzeni.
Olunye uphawu olubalulekileyo lwe Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje kukusetyenziswa kwemigca ebukhali ukuvelisa iifom ezibalaseleyo. Ibeka ugxininiso kwimigca ethe tyaba-njengemijelo ebusweni bekhabhathi, izixhobo zekhabhathi ezinde, izitokhwe zeekhabhathi ezigqityiweyo zilandelelana, i-tile yethayile yokubuyela umva egxininisa kwikhabhathi yekhitshi okanye ukubiza okuthe tyaba emthini.
Ngokwesiko, ipateni yokugawulwa kweengcango okanye iiphaneli zilandela ukuma ngokuthe nkqo kodwa iikhabhathi zekhitshi zale mihla zilandela ngokuchaseneyo kwaye ngamanye amaxesha zinemingxunya ehambelana nepateni yayo ethe tyaba.
Ngokubanzi, iingcango zekhabinethi zekhitshi zale mihla zibonakaliswa luhlobo lwabo olulula, olucekeceke nolwesitayile. Ihlanjululwe ngohlobo, yenziwe yimigca ye-angular ebonakalayo, ayinanto yokuhombisa kwaye inomphezulu ogudileyo.
Uphawu lokusayina lweengcango zekhabinethi zekhitshi yanamhlanje kukuba zilula kakhulu. Uyilo luthe ngqo kwaye lubeka ugxininiso kukungabikho komhombiso. Nangona ijolise ekusetyenzisweni okunzima kwemigca ethe tye, iingcango zekhabinethi zekhitshi langoku zinokusebenzisa imigca egobile kunye nee-engile.
Uhlobo lwesango lomnyango osicaba lolona hlobo luqhelekileyo loyilo lomnyango wekhabhinethi olusetyenziswa kwiikhabhathi zekhitshi zale mihla. Ikwabizwa ngokuba yisitayile somnyango we-slab, isitayile somnyango wepaneli esicaba sibonakala ngokungabonakali. Ithatha emva kwegama layo kuba yenziwe ngohlobo olunye, olungahonjiswanga, islabha yomthi ethe tyaba. Iingcango zekhabinethi zibonisa indawo egudileyo engenazinkcukacha zemikrolo entsonkothileyo, ukubumba okuhombisayo, ukudibanisa okanye iipaneli eziphakanyisiweyo kunye nezangaphakathi.
Uhlobo lokwakha lweengcango zekhabinethi zekhitshi lanamhlanje zihlala zilandela ulwakhiwo olungagqitywanga, eligcweleyo, oko kuthetha ukuba ucango lubambelela ngokupheleleyo okanye lugqume ibhokisi yebhokisi okanye isidumbu. Indlela yokwakha ikhabethe eyogqume ngaphezulu ikhokelela ekubukekeni okungathethekiyo xa kuthelekiswa nekhabhathi yangaphakathi egungxulweyo. Iikhabhathi zasekhitshini ezingenazingcingo nazo azibonisi naluphi na uhlobo lokuyilwa phakathi komnyango wekhabhathi nganye, okukhokelela kutshintsho olugudileyo kunye nokulingana phakathi kwazo zonke iingcango zekhabhinethi kunye needrowa.
Iingcango zekhabinethi zekhitshi zale mihla zikwasebenzisa iingcango zeglasi ezinqabileyo ukwenza ukubukeka okungaphezulu.Kwezinye iimeko, isitayela somnyango we-Shaker sisetyenzisiwe, nangona kunjalo uyilo lwekhitshi ludla ngokuxhomekeka kumxholo woTshintsho kunangoku. Nangona kunjalo, olu hlobo loyilo lomnyango lusenokusetyenziswa ngokude nje zonke ezinye izinto kwisithuba zihambelane nobuhle be-aesthetics.
Nangona icacile, uyilo lwekhabhathi yekhitshi lwanamhlanje luhle kakhulu kwaye lubukeka. Abasweli mlinganiswa ngenxa yenkangeleko yabo yesitayile ezisa inqindi kunye nokuthelekisa kwigumbi.
Ngokwesiko, iikhabhathi zekhitshi zisebenzisa izinto zendalo ezinje ngomthi oqinileyo njengezinto zokuqala zokwakha, nangona kunjalo kwikhabhinethi yanamhlanje yasekhitshini, zombini izinto zendalo kunye nezinto ezenziwe ngabantu zinokusetyenziswa. Iingcango zekhabinethi zekhitshi zale mihla zihlala zisebenzisa iinkuni, i-MDF, iplastiki, iglasi kunye nezinyithi ezinje ngealuminium kunye nentsimbi engenasici. Ngamanye amaxesha ezi zinto zixutywe ukuvelisa uyilo olunomdla ngakumbi, njengocango lweglasi lweqabaka olunekhephu kunye nesakhelo sealuminium.
Inkuni ikwasetyenziswa kolu hlobo, kodwa endaweni yokusebenzisa uhlobo olunye, isitayile sekhabhathi zekhitshi lwanamhlanje sidibanisa ukugqitywa okungafaniyo. Uhlobo lweenkuni oluthandwa kakhulu ziikhabhathi zekhitshi zale mihla zezo zinendlela ebonakalayo ethe tyaba.
Iikhabhathi zekhitshi zale mihla nazo zihlala zigqityiwe nge-laminates ekumgangatho ophezulu kunye nezinto ezenziwe ngomthi. Ngokungafaniyo neekhabhathi zesiko eziya kugingqa, zibangela uxinzelelo okanye zitshabalalise ixesha elinxibileyo kunye nokuqaqamba, iikhabhathi zekhitshi zanamhlanje pt yokujonga okutsha, imbonakalo eqaqambileyo kunye nevibe ehlaziyiweyo. Ukwenza ukubukeka okuhle kakhulu, iikhabhathi zekhitshi zale mihla zihlala zigqityiwe ngezinto eziphezulu zokuhombisa okanye indawo egudileyo.
Enye into ebalulekileyo yeekhabhathi zekhitshi zale mihla sisixhobo esibukhali. Izixhobo zekhabhinethi zekhabhathi zekhitshi zale mihla zicacile, zilula kwaye zicocekile.
Umongo wendlela yoyilo lwekhabhinethi yanamhlanje kukuba nomhombiso omncinci. Ikhabhinethi kunye nezinto ezisetyenzisiweyo zihlala zithatha indawo ephambili kwiikhikhini zanamhlanje kwaye, i-hardware yekhabhinethi ayinamandla. Endaweni yokuma ngaphandle, izixhobo zekhabinethi zekhitshi yanamhlanje zijongeka ngakumbi. Ngokwesiqhelo, batywiliselwa kumphezulu womnyango wekhabhathi okanye ukuba akunjalo, babaleka ubude beengcango zekhabinethi kunye needraw zokugxininisa imigca yazo. Ukongeza, abanazo iinkcukacha zokuhombisa ezinje nge-etchings, motifs okanye imizobo.
Izixhobo zekhabhathi ezifihlakeleyo kunye nokugqitywa kokuchanekileyo kunokwenza igalelo elikhulu kuyilo lwekhabhathi yekhitshi yanamhlanje. I-liner elula, ende eyomileyo yokutsala ikhabhathi ye-satin, umzekelo, ijongeka imangalisa kwiikhabhathi eziphezulu zekhitshi. Omnye umzekelo ziziphatho zesinyithi ezixineneyo ezihambelana nomgangatho wekhabhathi wekhitshi. Zombini ezi ntlobo zehardware zekhabhathi azigciniwe phantsi, ukanti ukuhambelana ngokugqibeleleyo nekhabhathi yala maxesha.
Nazi ezinye iintlobo kunye nemizekelo yezixhobo zekhabinethi zekhitshi zale mihla:
Ibha yeplati iyatsala Ibar yeplati etsala inemiphetho yesikwere kunye neprofayile ye-angular ebonakalayo. Ungalusebenzisa olu hlobo lwehardware ukuba ufuna ukugxininisa ii-angular element kuyilo lwekhitshi ngokongeza uvakalelo oluqinileyo kwiikhabhathi. Olu hlobo lwekhabhathi yentsimbi lusetyenziswe kakuhle kwiidrowa ezithe tyaba okanye iikhabhathi zepaneli ezithe tyaba ezinepateni yokugaya ethe tyaba.
Cima ibha ephathekayo -Lolu hlobo lwezixhobo zekhompyutha ngumahluko wokutsalwa kwebar tyaba. Ikwanemiphetho yesikwere kodwa endaweni yokuba noyilo olucacileyo, ine-rectangular encinci enqunqwe embindini. Unokukhetha oku ukuba ufuna ukongeza isimbo esingacacanga kunye nepunch eyongezelelweyo kwiikhabhathi zakho zasekhitshini. Oku kusebenza ngokukuko kunye neekhabhathi zekhitshi zangoku zasekhitshini kwindawo ephezulu yokuhombisa. Eqinileyo, ikhabethe enemibala ecacileyo yenza ukuba ukusika kubonakale ngakumbi xa kuthelekiswa nekhabhathi enziwe ngomthi.
Umtsalane ophelileyo s -Ukutsalwa okuvalelweyo kugxunyekwe ngokupheleleyo kumnyango wekhabhinethi okanye ubuso beedrowa, endaweni yokubambelela ngaphandle. Banobume obusebenzayo kunye nobusebenzisayo njengoko bengafumani ndlela yabasebenzisi. Olu lukhetho lwakho olulungileyo ukuba ufuna ukugcina indawo ethe tyaba kwikhabhinethi yakho. Ukutsalwa okuvalelweyo kuqhele ukusetyenziselwa iidrowa, iingcango zokugqitha kunye neengcango zesitayile. Zijongeka zintle kwiikhabhathi ezinamabala emithi xa kuthelekiswa neekhabhathi ezinobukhazikhazi obuphezulu.
Iityhubhu zentsimbi engenanto yenziwe - Olu hlobo loyilo lwezixhobo zekhabhathi lubonwa njengodidi oluqhelekileyo kwaye luqhele ukufunyanwa kwiikhabhathi zepaneli ezisicaba kunye nekhabhathi yesitayile esijijekayo. Olu luphawu lwentsimbi olude oluchanekileyo oluneprofayili ejikelezileyo kunye neephephelo zokugqibela ezigungxulweyo, olu hlobo lwekhitshi lekhabhathi yentsimbi inegalelo kwimizi-mveliso kwiikhikhini zangoku. njengekhabhinethi okanye idrowa. Ixesha elide ikhabethe lokutsala likhona, isitetimenti esidalileyo siyenza ngesibindi.
Izimvo zesipho seminyaka emi-5
Ukutsalwa kwebar -Yenye uyilo lwekhabhathi yeklasikhi eyaduma evela e-Itali naseSpain. Kude kube yile mini, olu qulunqo lwekhabhathi yentsimbi yenye yeentandokazi kwindawo yoyilo ekhitshini, kwaye kuye kwangqineka kungaze kuphume isitayile kule minyaka idlulileyo. Xa kuthelekiswa notsalo olungenasici olungenasici olunesiphelo esityibilikisiweyo, olu hlobo luneziphelo ezithi nca ngaphandle, inde kunenxalenye ejijelweyo ebusweni bekhabhinethi. Ukutsalwa kwebha kukwanokubonakala okuhle kwaye kusebenze kakuhle kwipaneli ethe tyaba okanye iingcango zekhabhathi zesitayile. Oku kuhlala kwenziwe ngentsimbi engenasici kwaye kuza kwisitini esinebrashi okanye ukugqitywa kwe-chrome.
Ithebhu iyatsala -Ukutsala i-Tab luhlobo lwekhompyuter yehardware yangaphakathi ekhwele kwikhabhathi. Inobume be-L kwaye ihlala iqhotyoshelwe kwelona candelo liphezulu lomnyango wekhabhathi okanye ubuso beedrowa. Inokuba ncinane okanye ingaqhuba ubude obupheleleyo bomnyango wekhabhathi okanye idrowa. Iithebhu ziyasebenza kakhulu kodwa zenza ingxelo eqinileyo yeekhabhathi zekhitshi zolu hlobo, ezi zixhobo, nokuba zingenasici okanye zimnyama zikhangeleka njengee-aksenti zoyilo ezinika umlinganiso kwinkangeleko yekhitshi ngokubanzi. Ithebhu emnyama iyatsala, umzekelo, ibonelela ngumahluko ocacileyo xa isetyenziswa ngombala omhlophe omhlophe ophezulu kwikhabhathi yekhitshi. Oku kukwasetyenziselwa isitayile se-slab okanye iingcango zepaneli ezithe tyaba kunye nomdlalo oqinisekileyo wokuhomba okuphezulu kunye nekhabhathi zokwenza umthi.
Ucingo lutsala -Ucingo lokutsala luneprofayili encinci, eneprofayili encinci, edibeneyo yeC kunye nemiphetho ejikelezayo. Olu hlobo lwekhompyuter yehardware inoyilo olulula, olufihlakeleyo, oluyiklasikhi kwaye lufezekile ukuba ufuna i-Hardware engakhuphisani nayo yonke ikhabhathi yakho. Yincinci ngobukhulu kwaye isebenza kakuhle nangalo naluphi na uhlobo lwekhabhathi yekhitshi yale mihla, nokuba ikuluhlu oluphezulu okanye veneer yomthi. Ikwayinto efanelekileyo yokugqibezela izixhobo zekhitshi ezingenasici.
Umjelo we-J okanye we-C wesitishi sensimbi -UJ okanye C umjelo wentsimbi kaloliwe utsalwa abonakaliswa ngophawu lwe-C kunye no-J, olugxunyekwe ngokupheleleyo kumnyango wekhabhathi okanye ubuso bedraw. Olu hlobo lwekhabhathi yekhabinethi lubukeka buhle kakhulu kwaye luyila uyilo oludibeneyo lwekhabhathi kuba utsalo alunamathelisi ngaphandle kweengcango zekhabhinethi. Nangona kunjalo, enye into ebuyayo yokusebenzisa olu hlobo lwekhabhathi yentsimbi kukuba ukungcola nothuli kunokuqokelelana ngokulula ngaphakathi kwamajelo. I-J okanye i-C yentsimbi kaloliwe etsala ukuqhuba isibhakabhaka esigcweleyo somnyango wekhabhathi kunye neyunithi yedrowa, yiyo loo nto egxininisa ngakumbi kuyilo lomgama ngakumbi. Ikwafakwe kwinqanaba eliphezulu lomnyango wekhabhathi, yenza uhlobo lwesandi. Olu luyilo lwekhabhathi lwekhabhathi luzilungele kakuhle iingcango zepaneli ezithe tyaba kwaye zijongeka zintle kuzo zombini iikhabhathi zekhitshi zekhitshi kunye nekhabhathi ephezulu yokuhombisa.
C Umjelo odityanisiweyo wokutsala iinkuni -Ukuba awuyithandi inkangeleko yezixhobo ezixubileyo kwiikhabhathi zakho zasekhitshini kwaye ukhetha uyilo olungaphezulu, ke olu hlobo lwekhabhathi yentsimbi yeyona nto ifanelekileyo kuwe. Olu hlobo lwezixhobo zekhabhinethi ziphantse zafana no-C kunye no-J wesitishi somzila wesinyithi, kodwa uthatha iprofayile emilise ngo-C. Isiteshi se-C esidityanisiweyo somthi senza ukujonga okungagungqiyo kunye notshintsho olugudileyo phakathi kobuso bekhabhinethi kunye nezixhobo zekhabinethi, enyanisweni, iziphumo zifana noyilo olungenakubanjwa. Kuba yenziwe ngomthi, ayiphikisani nekhabhathi zekhitshi ezenziwe ngomthi, kodwa endaweni yoko idibana ngokugqibeleleyo. Oku kulungele iikhabhathi zekhitshi zanamhlanje kwimithi yeplanga okanye ukugqitywa komthi.
Ngaphandle koyilo, ukugqitywa kwezixhobo zokusebenza kubalulekile ekwenziweni koyilo olufanelekileyo lwekhitshi ekhayeni lakho. Njengoko besitsho, iinkcukacha ezincinci zibalulekile kunye nolungelelwaniso olufanelekileyo lokumiswa kunye nokugqitywa kuqinisekisa ukuhlangana okuhlangeneyo kwekhitshi lakho.
Olunye ugqibo oludumileyo lwezixhobo zekhabhinethi zangoku zezi:
Nazi ezinye iintlobo kunye nemizekelo yezixhobo zekhabinethi zekhitshi zangoku ezigqityiweyo:
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo -Ikhabhathi yentsimbi yekhabhathi yentsimbi yaziwa ngokuba yomelele kwaye yomelele kakhulu. Olu hlobo lwesiphelo sekhabhathi yentsimbi sinombala obukhali kakhulu, obonelela ngenkangeleko ecocekileyo kunye nokukhanya okuqaqambileyo. Eyona nto ibhangqwe kakuhle kukukhanya okukhanyayo kunye nemnyama iikhabhathi zekhitshi zangoku kwaye kukugqibezela okuthe tye, umphezulu ocekethekileyo wokugqiba okuphezulu kwekhabinethi ekhitshini.
Isilivere yeSatin -I-Satin yokugqiba izixhobo zekhabhinethi inenkangeleko ethambileyo xa ithelekiswa noogxa bayo abacoliweyo. Ngokungafaniyo nekhabhathi yentsimbi ekhazimlisiweyo, izixhobo zekhabethe yesilivere yesilivere ine-matte, imbonakalo ebrashiweyo. Isilivere ye-satin yokugqiba ikhabhathi yentsimbi ilunge kakhulu kwikhabhathi emnyama yanamhlanje ekhitshini kwaye ikwadibanisa kakuhle nesixhobo sentsimbi esingenasici. Olu hlobo lokugqitywa kwekhabhathi yekhitshi lekhitshi lukwanika isibonelelo esongeziweyo malunga nolondolozo njengoko imizila yeminwe ingaphawuli ngokulula kumphezulu wayo.
I-Nickel ebrashiweyo -I-nickel ebrashiweyo inembonakalo ecekeceke ngakumbi xa ithelekiswa nenickel ebengezelelweyo kwaye ibonakaliswa kukukhanya okuthambileyo. Ungalusebenzisa olu hlobo lwezixhobo zehardware ukuba ufuna ukutsala kunye nokuphatha ukudibanisa endaweni yoko. Ihambelana ngokuchanekileyo nekhabhathi emnyama yanamhlanje ekhitshini.
I-Chrome epholileyo - Olu hlobo lwekhompyuter yehardware luphawulwa ngombala wayo wesilivere oqaqambileyo. Ukubonakala kwayo okuqaqambileyo kunegalelo kwisibheno esiqaqambileyo kwikhabhathi yekhitshi. I-chrome ekhazimlisiweyo ilunge ngakumbi ngokuhambelana nesixhobo sekhitshi kunye nekhabhathi yala khitshi inemibala emnyama.
Mnyama -Ihardware yekhabhathi emnyama inikezela ubundilele kodwa inika ingxelo eqinileyo kwikhabhathi yekhitshi ngaphandle kokugagamela zonke ezinye izinto zoyilo kwisithuba. Ungalusebenzisa olu hlobo lwesiphelo sekhabhathi yehardware ukuba ufuna ukwenza umahluko kunye nekhabhathi emhlophe yekhitshi. Ngokubanzi izixhobo zekhabhathi ezimnyama zivelisa inkangeleko entle nenesitayile.
Olunye lwophawu lwentengiso lwekhabhathi zekhitshi zangoku ezibahlula kwezinye kukusetyenziswa kwemibala encinci kunye nokuthungwa nangona kunjalo, ikwayindlela yokhitshi yekhitshi esebenza ngokukhululekileyo ngee-shades ezinamandla.
Imibala yeekhabhathi zekhitshi zale mihla zixhomekeke kokungathathi cala, kodwa iithoni ezichaseneyo kunye nemibala eqaqambileyo zikwasetyenziselwa ukongeza umbala kwindawo. Kwizinto zangaphakathi zekhitshi zangaphakathi zekhitshi zisebenzisa ii-naturals hues ezimhlophe, ezimnyama, ezimdaka kunye nezimvi kwikhabhathi yekhitshi. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuba nomdla ngakumbi, imibala enesibindi inokuba yinxalenye yephalethi yekhabinethi yakho yasekhitshini. Amagqabantshintshi eBold njengobomvu obunzulu, iiorenji ezinamandla, umbala ophuzi ngokuluhlaza kunye noluhlaza okwesibhakabhaka nawo ongezelelwa ukunika umbala wombala kunye nokwenza i-retro ephefumlelweyo ye-vibe yangoku.
Imibala yekhabhathi engathathi hlangothi ibonelela ngokuguqukayo ngokweendlela zokuxuba kunye nokuhambelana nezinto ezahlukeneyo kwindawo. Ikhabhathi enombala ongathath'icala nayo isebenza njengeseyile engenanto evumela abanini khaya kunye nabaqambi ukuba bazise ii-accents kwisithuba, njengezixhobo ezinamandla okanye ogqityiweyo ogqityiweyo. Ngenye indlela, iinkuni zendalo kunye nezinto ezenziwe ngomthi zinokusetyenziswa ukuba ukhetha ubungqongqo bendalo kunye nobushushu.
Kwelinye icala, iikhabhathi ezinemibala e-Bold, zihlala zisetyenziselwa ukuvuselela imeko yekhitshi. Ukuba ufuna ukwenza ikhabhinethi yakho yanamhlanje kugxilwe kwigumbi, ungaphonononga ii-hues eziphilileyo ukwenza ingxelo eqinileyo kunye nomdla obonakalayo. Xa usebenzisa imibala ekhaliphileyo kwikhabhathi yekhitshi yale mihla, qiniseka nje ukuba wazisa into yokunciphisa imeko yomoya. Nayi eminye imizekelo yembala ebonakalayo yeekhabhathi zekhitshi zangoku:
Inethi -Bomvu ithathwa njengeyona ithandwayo yaya kumbala kwiikhitshi zale mihla ngenxa yesibheno sayo esishushu nesamkelayo. Lo mthunzi udlamkileyo ukholelwa ekubeni uyisikhuthazo sokutya yiyo loo nto ufumaneka rhoqo kuseto lwekhitshi. Ipeyinti ebomvu ibukeka imangalisa njengokugqibezela okuphezulu. Eminye imibala ebomvu ethandwayo kwikhabhathi yekhitshi yanamhlanje ibomvu krrabheri, umlilo obomvu krwe kunye nobomvu. Ukuba ufuna indawo ephucukileyo yekhitshi, ungasebenzisa umahluko wombala obomvu njengemagenta, ikorale kunye nepinki eshushu. Nangona kunjalo, le mibala kufuneka isetyenziswe ngononophelo kwaye ilungelelaniswe nokungathathi cala okufana nomhlophe okanye isandi somthi esimnyama esimnyama ukwenza isiphumo esincinci.
orenji -Iorenji inegalelo kwisibheno esinika amandla kwikhabhathi yekhitshi yale mihla. Ukuqaqamba okwangoku, sebenzisa imibala efana netangerine.
Lubhelu -Ikhabhathi yekhitshi etyheli inegalelo kwi-cheery vibe kwiindawo zekhitshi. Le hue enelanga yaziwa ngokuqaqambisa kwangoko iphalethi kunye nemo yendawo yekhitshi. Ungasebenzisa tyheli njengombala ophambili wekhabhathi yekhitshi, okanye njengokugqibezela Isiqithi sanamhlanje sekhitshi ukwenza ingxelo. Ngenye indlela, inokusetyenziselwa eludongeni lwe-aksenti. Ye Ukujikeleza okwangoku ngakumbi, jonga i-shades eqaqambileyo, eqaqambileyo ene-neon njengoko inokwenza ikhabhathi yakho yekhitshi ukuba iphume ngokwenene.
Luhlaza -I-Bue, ngokubanzi, ngumbala ohlaziya kakhulu, kwaye ubuhle bayo kukuba umthunzi wayo ngamnye uvelisa indawo eyahlukileyo kwisithuba. Uninzi lwabanini bamakhaya kunye nabaqulunqi bajonga i-navy blue njengombala omnyama omtsha, kwaye lo mbala usebenza kwikhabhathi yekhitshi yanamhlanje ngendlela efanayo nombala ongathathi hlangothi. Ikhabhathi yasekhitshini eluhlaza okwesibhakabhaka inika indlela entle yokwazisa umbala omnyama ekhitshini lakho, kwaye ayomelele kwaye ayinamandla. ICobalt eluhlaza okwesibhakabhaka ngomnye umthunzi othandwayo kwaye unikezela ngombala odlamkileyo ngakumbi, wombala onobunkunkqele nobonwabisayo. Iibhulukhwe zekhitshini eziluhlaza okwesibhakabhaka nazo zinokulinganiswa kunye nokusetyenziswa kwemibala ekhanyayo enje ngwevu, mhlophe, imibala eqaqambileyo eblowu okanye umbala owahlukileyo njengombala omthubi.
Luhlaza -Oluhlaza kuqhelekileyo kusetyenziswa kuzo zombini iisetingi zesiko, zangoku nezexesha langoku kuba kuthathwa njengombala okhuselekileyo. Nangona kunjalo, ukuba ufuna okokugqibela, qiniseka ukuba uyakhazimla, imibala eqaqambileyo enje nge-lime eluhlaza, i-aqua, i-chartreuse, i-emerald eluhlaza okanye i-mint green. I-lime eluhlaza kunye ne-chartreuse ekhitshini yekhabhathi inokuzisa kwangoko amandla kwindawo yasekhitshini yanamhlanje. I-Mint eluhlaza, yindawo ethobekileyo ngakumbi kunye nolunye uhlobo olunamandla olunokuthi lube negalelo ekuhlaziyweni kwindawo. Ukukhanya okuluhlaza okomhlaza yenye enye indlela, kodwa ayinikeli umbala omnye wombala onombala oluhlaza. IKhabinethi yekhitshini eluhlaza yanamhlanje ibhangqiwe nge-chrome nickel hardware ukuba ufuna ukuphucula umbala wayo. Ikwangumdlalo ofanelekileyo kwizixhobo zekhitshi ezingenasici.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili kweli nqaku, iikhabhathi zekhitshi zale mihla zilungiselelwe ukungathathi cala kunye nemibala eqaqambileyo, eqaqambileyo. Iikhabhathi zekhitshi ezingathath'icala zingasetyenziselwa ukuba ujonge ukufezekisa i-aesthetics yeli xesha lincinci, ngelixa imibala eqaqambileyo kunye neqaqambileyo inokusetyenziswa ukuba ufuna ukwenza ukujonga okukhanyayo.
Phakathi kokungathathi hlangothi, abamnyama nabamhlophe kukhetho lombala weklasikhi kwiikhabhathi zekhitshi zangoku. Imibala ye-Bth ayinasiphelo kwaye inikezela ngokungafaniyo.
Inkangeleko entle ye ikhitshi emhlophe yanamhlanje iikhabhathi zibenza umbala wekhabhathi olungeleyo ukulungiselela useto lwangoku lwekhitshi. Ngapha koko, yenye yezona mbala zithandwayo zekhabinethi kwiikhabhathi zekhitshi zangoku. Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini lukhetho olungapheliyo kwaye ziyafakazelwa ukuba azisoze zaphuma ngesitayile nkqu nakumashumi eminyaka.
Zininzi ezinye izibonelelo zeekhabhathi ezimhlophe zekhitshi zangoku. Okokuqala kukuba inegalelo lokongezwa kwe-aesthetics kunye nomdla obonakalayo. Ngokubanzi, iiprojekthi zekhabhathi ezimhlophe zekhitshi zangoku kunye nobunkunkqele. Umbala omhlophe ngokwawo ubonakala uhleli, yintoni enye ongayisebenzisa kwikhabethe ekhitshini ekhazimlayo ephezulu. Iziphumo zizonke ziyamangalisa kwaye ziyathandeka.
Olunye uncedo olongeziweyo kukuba iikhabhathi ezimhlophe zekhitshi zangoku zizisa i-aura elungileyo kwigumbi. Ingena egumbini kwaye inokwenza kwangoko ukukhanya, okunika amandla esithubeni. Kulula emehlweni xa kuthelekiswa nekhabhathi emnyama yasekhitshini
Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zikwalungele kakhulu amakhitshi amancinci anamhlanje kuba yenza umbono wendawo enkulu. Iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zanamhlanje zenza ukuba iindawo zibonakale ziqaqambile ngokwandisa iimeko zokukhanyisa. Ukuba ufuna ukwenza ikhitshi lakho libukeke licocekile, ungasebenzisa iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zangoku njengoko zinococeko nococeko. Ukungcola nothuli kunokubonwa ngokulula kumphezulu wekhabhathi emhlophe, yiyo loo nto kulula kakhulu ukuyibona nokucoca.
I-White ikwajongwa njengombala osilelayo wombala wekhabhathi ngenxa yokuba bhetyebhetye kunye nokuguquguquka okunikezelayo ngokwemiqathango yokuxuba kunye nokuthelekisa ezinye izinto ekhitshini. Iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zangoku zinokuncediswa ngawo nawuphi na umbala wokuhombisa okanye isixhobo. Xa unesibhakabhaka esipheleleyo sekhabhathi zekhitshi ezimhlophe zekhaya lakho, isebenza njengendawo emnyama egqibeleleyo yokwazisa umbala ogqamileyo onokwenza ikhitshi lakho libe nomdla ngakumbi.
Nangona kunjalo, abanye banokufumana iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zangoku zingacacanga, zicacile okanye ziyadika. Kodwa zininzi iindlela zokuphucula imeko yazo zonke iikhabhathi ezimhlophe zekhitshi. Unokufaka umbala wombala ngokusebenzisa izixhobo, okanye ukwazise isandi sopende, udonga lomgangatho okanye ikhitshi elingasemva. A Isiqithi sekhitshi esahlukileyo ikwayenye indlela yokwaphula uluvo lwekhabhathi ezimhlophe ezingacacanga. Ukongeza umahluko ngombala kunika ubunzulu, ubukhulu kunye nokulingana kwisithuba.
Enye into ebambekayo kwiikhabhathi ezimhlophe zekhitshi kukuba bafuna ukucocwa rhoqo kunye nokusulwa. Nangona ibukeka icocekile, iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zangoku zibonisa ubumdaka ngokulula kwaye zityhile ukukrwela, ismudges kunye nokutshiza ngokukhawuleza. Kuba ukungcola nothuli kulula ukuzibona, ukusula rhoqo kuyafuneka ukuze kuqinisekiswe ukuba akunasiphako, ispick kunye nobungakanani bokubukeka. Ukuba ayinyamekelwa kakuhle, iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe zanamhlanje zinokuphela okanye zijike zibe tyheli njengoko ziguga. Nangona kunjalo, ukukhetha umgangatho ophezulu wokugqitywa kwe-gloss kuya kuqinisekisa ukusebenza kakuhle kunye nokuhlala ixesha elide kwikhabhathi yekhitshi.
Umnyama ngomnye umbala ophambili wekhabhathi zekhitshi zangoku. Njengamakhabhathi amhlophe ekhitshi, iikhabhathi ezimnyama zasekhitshini zinesitayile, zintle, zinhle kwaye zinobunkunkqele. Xa kuthelekiswa nomlingani wayo omhlophe, iikhabhathi zekhitshi ezimnyama zanamhlanje zinesibindi kwaye zinika ingxelo ebalaseleyo kwisithuba, ngaphandle kokulula kwazo.
Iikhabhathi zekhitshi ezimnyama zangoku ezinokugqitywa okumenyezelayo zikwazisa imeko yokunethezeka emajukujukwini. Inokutshintsha kwangoko indawo ebuthuntu, ngaphandle kokuzibophelela kubunombala obucacileyo. Iikhabhathi zekhitshi ezimnyama zala maxesha ziyaziwa ngokuzisa umdlalo kwindawo. Iikhabhathi zekhitshi zalapha ekhaya ezinehardware ebukhali nayo ikwakhombisa ukujonga okuphezulu, yiyo loo nto yenza umbono wokuba uchithe imali eninzi ekhitshini lakho.
Kuba umnyama awuthathi hlangothi, umbala wekhabinethi yasekhitshini ukwahluka kwaye ubhetyebhetye ngokwendlela yoyilo. Inika ukhetho oluninzi lwezixhobo zekhabhinethi kunye nezixhobo zasekhitshini. Ikwahambelana kakuhle nezinto ezininzi ezigqityiweyo kunye nezixhobo. Iikhabhathi zekhitshi ezimnyama zanamhlanje zihlala zisetyenziswa ukuba ufuna ukwenza umahluko kwisithuba. Ukumatanisa neendonga ezimhlophe kudala ukubonakala kweklasikhi ngokuqinisekileyo okunokuma kuvavanyo lwexesha. Ngenye indlela, iikhabhathi zekhitshi ezimnyama zangoku zinokuncediswa ngezinto ezinemibala eqaqambileyo ukuze zingene kubuhle bezi mini.
Nangona ithathwa njengokuchasene nokumhlophe, iikhabhathi zekhitshi ezimnyama zanamhlanje nazo zinenkangeleko ecocekileyo. Nangona kunjalo enye into engalunganga enkulu kwiikhabhathi zekhitshi ezimnyama zale mihla kukuba ihlala ibonisa ukukrweleka ngokulula. Ukwahluka kwayo kubengezela kunokufuna ukosula rhoqo njengoko bathambekele ekubonakaliseni iminwe, amasuntswana othuli kunye neewatch ngokulula. Ukuthintela okunjalo, iikhabhathi zekhitshi ezimnyama zanamhlanje kufuneka zisulwe ngelaphu elifumileyo rhoqo.
Iikhabhathi zekhitshi ezimnyama zanamhlanje zingenza ukuba ikhitshi libukeke linzima, kodwa isitshixo sokwenza imo ebonakalayo enomdla kunye nengaphantsi kwesithuba kukuyixuba kunye nezinto ezahlukeneyo kunye nokugqiba Oku kunokuthintelwa ngokwazisa into yokulinganisa kwisithuba Nditsho nangaphandle kwephalethi yombala. Hlanganisa iikhabhathi zekhitshi ezimnyama zangoku ezinemibala eqaqambileyo okanye eqaqambileyo usebenzisa ipeyinti yodonga, i-flooring, izinto ze-backsplash, ukuhonjiswa kunye nezixhobo.
Uhlobo lwaseYurophu lwaMandulo oluPhezulu lweeGlass zeKhitshi
Iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu ziyaziwa ngokubonakala kwazo okumangalisayo kunye nokugqitywa okuphezulu. Olunye uphawu lwekhabhathi zaseYurophu zekhitshi luyilo olulula nolungqalileyo olwenza ukuba zilungele imeko yasekhitshini yanamhlanje. Ngokubanzi, olu hlobo lwekhabhathi yekhitshi lubonakaliswa sisibheno esisebenzayo kunye nesomzi mveliso.
Isitayile sekhitshi laseYurophu siphenjelelwa kakhulu yisitayile saseMelika, kodwa sinobuntu obucekeceke. Uyilo lwekhabhathi yekhitshi lujolise ekugxileni ngakumbi ekusebenzeni nasekusebenzeni endaweni yokuhombisa. Ngenxa yendalo ekhoyo yeeflethi zaseYurophu kunye namagumbi, uphawu lwentengiso lweekhitshi zaseYurophu zazalwa. Indawo encinci kunye nobungakanani beendawo zokuhlala kunye neendawo eziqeshisayo eYurophu zibangele isidingo esikhulu sokwenza ikhitshi elinobukhulu obungaphezulu. Ikhabhinethi ekhitshini esebenzayo ngokupheleleyo ekhulisa indawo emva koko yaphuhliswa ukongeza ukufikeleleka kunye nokulula ngokusetyenziswa.
Iikhabhathi zaseYurophu zekhitshi ngamanye amaxesha zibhekisa kwifom ekumgangatho ophezulu weenkqubo zekhabhinethi ezimodyuli. Abenzi bekhabhathi baseYurophu baziwa kakuhle ngobugcisa babo obuhle kwiikhabhathi zangoku zemodyuli. Olu hlobo lwekhabhathi yekhitshi lukhuthaza ukwenziwa ngokwezifiso kunye nokwenza ubuqu njengoko abaninimzi banokongeza ngokukhululekileyo nayiphi na into yoyilo ehambelana nendawo yabo yekhitshi esele ikho. Ikwabonelela ngokuchaseneyo ngokwesicelo kunye nokuguquguquka ngokwendlela yoyilo njengoko iikhabhathi zinokugqitywa kuwo nawuphi na umbala ofanelana nabaninimzi ngokungcamla nokukhethwa kwabo kwisitayile.
Olunye uphawu oluphambili lwekhabhathi yaseYurophu ekhitshini yoyilo luyilo olungenasiseko kunye nolwakhiwo. Olu hlobo lwendlela yokwakha ikhabhathi ayisebenzisi isakhelo sekhabhinethi kodwa endaweni yoko isebenzisa isidumbu sekhabhathi esityebileyo okanye ukwakhiwa kwebhokisi kuzinzo. Iikhabhathi zekhitshi ezingenasiseko zisebenzisa iingcango ezigqunywe ngaphezulu eziqhotyoshelwe ngqo kumacala ebhokisi yekhabhathi okanye isidumbu. Olu hlobo lokwakha lwekhabhinethi lukwabandakanya ukusetyenziswa kweehenjisi ezifihliweyo okanye ezifihliweyo.
ishawa kwirock floor
Uyilo lwekhabhathi yaseYurophu olungenasiphelo bobabini bobuhle kunye nokusetyenziswa kwendalo kuba ibonelela ngokufikelela okuphezulu kunye nomthamo omkhulu wokugcina. Ikwabhekiswa kwikhabhathi yekhitshi yokufikelela ngokupheleleyo kuba akukho zakhelo zobuso bekhabinethi zithintela ukusetyenziswa kwayo. Kwaye kuba iikhabhathi zaseYurophu zekhitshi azinazo izakhelo, ikhabhinethi idibanisa ngakumbi ngaphandle komthungo nomnye nomnye, iqinisekisa ukutshintsha okuthe tye ngakumbi phakathi kwezinto ezahlukeneyo zesithuba kunye nokukhuthaza uyilo oludibeneyo.
Uyilo lwekhabhathi yekhitshi yaseYurophu nayo ayibonisi naziphi na iileyili ezithe tyaba kunye nokuma nkqo. Imiphezulu yekhabhathi icace gca kwaye ithe tyaba, kungasetyenziswanga umhombiso onjengemikrolo, ipaneli okanye ukubumba. Ngokwesixhobo sekhabhathi sekhabhathi yekhitshi, iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zisebenzisa izixhobo zokubamba zentsimbi ezilula kunye nokutsala okunemilo ehambileyo kunye nemigca ebukhali. Izinto ezisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu zokwahluka njengoko zisusela kwizinto zendalo ezinje ngomthi ukuya kwezinye iindlela zangoku ezinjenge-MDF kunye nebhodi yamasuntswana.
Enye into ebalulekileyo yeekhitshi zaseYurophu zekhitshi kukugqiba kwazo okuphezulu. Olu tyikityo olugudileyo, isibuko esifana nomphezulu siphantse safana nokugqitywa kweemoto. Lo mfanekiso ubonakalisa kakhulu, opolishiwe ufezekiswa ngokusetyenziswa kweendlela ezahlukeneyo zokugqiba ezifuna inkqubo ebanzi yabasebenzi. Ezinye iindlela zokuvelisa iikhabhathi ezibengezelayo ziqengqeleka okanye zihlanjwe ngebhanti yepeyinti ebengezelayo, ukupeyinta ngokutshiza ngokusetyenziswa kwesiguquli, ukusetyenziswa kwethala lethambo kunye nelacquering. Amaxesha ngamaxesha, ifuna izinto ezininzi zokugqiba, zilandelwe kukugcwala okulandela inkqubo efanayo ebandakanya ukwenziwa kweemoto.
Ngamanye amaxesha, kusetyenziswa ii-laminates zoxinzelelo oluphezulu njengenye indlela yokupeyinta ukugqiba. IiLaminates ziyafumaneka kububanzi obunemibala ebonakalayo kunye nokungathathi hlangothi okunokusebenza kakuhle ngobuhle obubalaseleyo bekhabhathi zekhitshi zaseYurophu. Kwaye ngaphandle kwalonto, uninzi lwabavelisi bayo banikezela uthotho olinganisa ukubonakala kweenkuni zokwenyani, ngelixa ezinye zivelisa umahluko omkhulu wokuhomba ofanelekileyo ukuba ufuna ukufezekisa inkangeleko ebengezelayo. Ngokwesiqhelo, ezi laminates zibengezelayo eziphezulu zoxinzelelo ngumatshini oxinelwe kwi-substrate emva koko isetyenziswa njengezona zinto ziphambili kwimveliso yekhabhinethi yase-gloss ephezulu. Ukubeka iibhodi zekhabhathi elaminethiweyo kubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo kuvumela imathiriyeli ukuba ibambane ngokudibeneyo, ngelixa isomeleza ukomelela.
Ngenxa yenkqubo enzima yokusebenza kunye nokuchitha ixesha, iikhabhathi eziphezulu zaseYurophu zinokufumana ixabiso kwaye zinokuxabisa ngokufana nekhabhathi epeyintiweyo. Inkqubo yokugqiba ihlala yenziwe ngaphandle kwesiza, kwindawo yokuvelisa okanye kwivenkile ekhethekileyo. Ukuchukumisa kunye nokulungisa iiglass zaseYurophu iikhabhathi zasekhitshini zisenokufuna ukushenxisa ucango lonke lwekhabhathi emva koko zilithumele kwivenkile ukuze zilungiswe.
Olona ncedo luphambili lokusebenzisa iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu kukuqina kwalo okuphezulu. Kuba ukugqitywa kubandakanya izinto ezininzi, umbala awunxibi ngokulula, xa kuthelekiswa nomnyango wekhabhathi opeyintwe rhoqo. Ukongeza koku, iikhabhathi zekhitshi eziphezulu zaseYurophu zithathwa njengotyalo-mali lobomi olunokongeza ixabiso kwikhaya lakho. Ngokwe-aesthetics, ukubonakala okuqaqambileyo kolu hlobo lwekhabhathi zekhitshi zanamuhla zinegalelo kubuhle kunye nesitayile kwizithuba, ngelixa zisenza ukuba bazive bonwabile ngakumbi. Inokunika iikhitshi ezincinci ziqaqambe, zibanzi ngakumbi kwaye zicoceke.
Iikhabhathi zesiko zala maxesha zenziwe uku-odola iikhabhathi zekhitshi. Ngokungafaniyo nekhabhathi yesitokhwe ekhitshini edla ngokwenziwa kunye nokuthengwa njengoko kunjalo, iikhabhathi zasekhitshini ezenziwe ngokwesiko zivumela ubuninzi bobuqu kunye nokuguqulwa. Akukho nanye kumacandelo ayo aqokelelwe kwangaphambili njengoko yonke into isikiwe, yenziwe ngobugcisa, yadityaniswa yenziwa kwasekuqaleni ngokweemfuno zomthengi ezithile kunye neemfuno zoyilo.
Uninzi lwabavelisi bekhabhinethi banikezela umgca wendlela yokwakha ikhabhinethi ehambelana ne-aesthetics yanamhlanje. Unokukhetha kwimigca yabo yokutyikitya kwaye uyenze ilungelelaniswe ngokobungakanani bekhitshi lakho okanye unokwenza uyilo lwakho ukuvelisa iikhabhathi ezingenamthungo ezihambelana nesitayile sanamhlanje. Ezi khabhathi zinokuthi emva kwexesha zigqitywe nge-lacquer, ipeyinti, ii-laminates okanye ii-veneers zomthi. Unokukhetha ukugqitywa kwesibhengezo xa uthenga ikhabethe yesiko lalemihla. Iimathiriyeli zekhabhathi zasekhitshini ezenziwe ngesiko ziinkuni eziqinileyo, i-MDF, iplywood, i-thermofoil okanye i-melamine.
Olona loncedo luphambili lwesiqhelo esenziwe ngekhabhinethi yinkululeko yokuyila. Ikuvumela ukuba wenze uyilo lwekhitshi olunesitayile, nangobuphi na ubungakanani, ubude okanye ububanzi, usebenzisa nasiphi na isixhobo okanye ukugqiba. Nokuba kunzima kangakanani na ukubekwa kwekhitshi lakho, isiko lekhabhinethi yangoku yesiko elinokuthi lenziwe ukuba lilungele kulo. Ikhabhinethi yala maxesha ihlala isetwa kufutshane nomgangatho ukwenza ngakumbi ikhitshi lokuvula ubeko.
Iikhabhathi zasekhitshini zesiko ngokwesiqhelo zakhiwa ngabenzi bezinto kunye nabenzi bekhabhathi abanezakhono kunye nabachweli. Ubungakanani bexesha kunye nomzamo oya kwinkqubo yokuvelisa wenza ukuba kubize. Kwaye ekubeni kuthatha inkqubo enzima yabasebenzi ukuyenza, cinga ixesha elikhokelayo xa kuthengwa iikhabhathi zekhitshi .
Ukuba indawo iyinto ethintelayo kuyilo lwekhitshi lakho langoku, khetha ikhabethe yesiko lekhitshi kuba inokuthi yenzelwe naluphi na uhlobo lwendawo kunye nolwakhiwo. Ukongeza, unokwandisa amandla okugcina iikhabhathi zasekhitshini kwaye wenze yonke into icwecwe kodwa isebenze ngokupheleleyo.Iikhabhathi zasekhitshini zaseYurophu ziyaziwa ngokuvelisa uyilo lwekhitshi oluhambelana.
Kwiikhitshi ezincinci zala maxesha, sebenzisa ukukhanya okanye imibala emhlophe ekhitshini yekhabhinethi njengoko zenza umbono wendawo enkulu. Ikhabhathi yekhitshi emhlophe nayo ivula indawo kwaye iyenze ikhanye ngakumbi kwaye ibe nomoya. Iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe ezicwebezelayo zinokukhanyisa kwangoko ikhitshi elincinci kwaye lizenze liziva lincinci.
Ukwenza nkulu i-intshi nganye yendawo ekhitshini lakho, faka isisombululo esigciniweyo kwikhabhinethi yakho yanamhlanje. Abaququzeleli kunye neebhasikithi zocingo banokunceda ukuphucula umbutho kunye nokugcinwa, ngelixa izinto ezintle njengokutsala kunye nokwehla kusinceda ekuphuculeni ukufikeleleka, ngelixa sandisa indawo encinci. Unokudibanisa izisombululo zokugcina izinto ezininzi okanye ifenitshala njengetafile encinci yokuwa ukuvumela abasebenzisi ukuba babandakanyeke kwimisebenzi eyahlukeneyo ekhitshini ngaphandle kokuthatha indawo eninzi.
Ukongeza, hlanganisa iiyunithi ezivulekileyo zishelufa kuyilo lwekhabhinethi yakho yanamhlanje njengoko zihlala zenza indawo izive ingaphantsi kwaye icinene xa kuthelekiswa nobubanzi obupheleleyo beekhabhathi zekhitshi.
Inkuni iya kuhlala iyinto ephezulu kwikhabhathi yekhitshi, ngokubanzi. Yongeza indalo ekhitshini, ibenza bazive beshushu ngakumbi kwaye bemema. Ngaphandle kokugqitywa okupeyinti okuphezulu okuxhaphakileyo okusetyenziswa kwiikhikhini zala maxesha, olunye uhlobo lokugqiba ngumthi. Xa kuthelekiswa neekhabhathi zemveli ezisebenzisa iinkuni zokwenene eziqinileyo, iikhabhathi zekhitshi zale mihla zinokwenziwa ngomthi wendalo okanye ngezinto zokwenziwa njengelaminate okanye veneer.
Iinkuni zeekhabhathi zekhitshi zale mihla mazilandele nobuncinane, obuhle kunye nobuhle obuhlengahlengisiweyo. Kuba uyilo lwala maxesha lubeka ugxininiso ekusetyenzisweni kwemigca ebukhali, iikhabhathi zekhitshi zanamhlanje zihlala zinepateni yokugaya ethe tyaba. Imibala ijolise kumthunzi omnyama xa kuthelekiswa neetoni ezikhanyayo. Eminye imibala eyaziwayo yemithi yeekhabhathi zekhitshi yanamhlanje yi-espresso, i-wenge, i-walnut emnyama kunye nomnyama.
Olunye uphawu olubonakalayo lweekhabhathi zekhitshi zangoku zeziuti kukuba zihlala zinesiphatho uyilo lwasimahla lokujonga ngakumbi ngaphandle komthungo. Ngamanye amaxesha basebenzisa umjelo we-C odityanisiweyo wokutsala iinkuni ukwenza utshintsho olungenampazamo phakathi kobuso bomnyango wekhabhathi kunye nezixhobo.
Ukuba ufuna ukunika iikhabhathi zakho ezindala inkangeleko entsha kunye nesibheno sanamhlanje, akukho sidingo sokutshintsha ikhabhathi iphela. Logama nje izakhelo kunye neengcango zikwimeko entle, ngokuvakalayo isandi, kwaye zikwimigangatho yazo esemgangathweni, unokuphumeza izilungiso ezininzi ezikhawulezayo ukuze ujongeke ngakumbi. Akukho sidingo sokuchitha imithwalo yemali ukwenza iikhabhathi ezindala zikhangeleke ngakumbi. Unokwenza lula ukwenza iikhabhathi zakho zasekhitshini ngeqhezu leendleko, usebenzisa ezi zikhokelo zoyilo zilandelayo.
Ngokubanzi, ukuvuswa kwakhona yenye yeendlela ezilula kunye nexabiso eliphantsi lokuhlaziya ukubonakala kweekhabhathi zekhitshi ezindala. Ukuphinda ufakele indawo yindlela esetyenziselwa ukunika iikhabhathi zasekhitshini inkangeleko entsha, ngaphandle kwesidingo sokutshintsha ikhabhathi iphela. Le nkqubo ikwabizwa ngokuba yi-refacing kuba ibandakanya ukutshintsha ubuso bekhabhinethi okanye ucango. Ukuphinda ufakele indawo kwakhona kunokuthetha ukuba endaweni yeengcango zekhabinethi, ukucokisa ubuso bekhabhathi, ukongeza iinkcukacha zokuhombisa okanye ukurhweba kwizixhobo ezindala ezintsha. Ikwabandakanya ukubeka isiqwenga sezinto zokugqibezela ngaphezulu kweengcango zekhabhinethi kunye neefreyimu ukuze zenze ukujonga okuhlaziyiweyo ngokupheleleyo.
Olona ncedo luphambili lokuphinda uvelise kwakhona kukuba uchitha kuphela isiqingatha sokuthenga iikhabhathi zasekhitshini kwaye usebenzisa ixesha elininzi kunye nomzamo. Yindlela elula yokuguqula ukubonakala kweekhabhathi ezindala zasekhitshini, ngelixa ususa isidingo semisebenzi enzima njengokukhupha iikhabhathi zasekhitshini. Ukongeza koku, ukuvuswa kwakhona kukuvumela ukuba usebenzise iikhabhathi zekhitshi esele zikhona kwaye ayivumeli nanye into ukuba ichithe.
Nazi ezinye iingcebiso zokwenza iikhabhathi ezindala zekhitshi zikhangeleke njengangoku:
Guqula iingcango zekhabhinethi ezindala yoyilo oluncinci . -Into enye edibeneyo yeekhabhathi zekhitshi yoluhlu oluncinci, aluyilo ucango lwekhabhathi. Ukuba uneekhabhathi zekhitshi ezikhangeleka ngokwesiko eziphakamise iphaneli, ukufaka, ukubumba okuhombisayo okanye imizobo, inyathelo lokuqala ekufuneka ulithathile kukuyeka loo nto uyitshintshe uyilo olulula nolulungelelanisiweyo. Ungaphonononga umnyango wekhabhathi ocabaleleyo okanye ucango lwesitayile somnyango wekhabhathi njengotshintsho lweengcango zakho zekhabhinethi ezikhoyo. Zombini zinendawo ethe tyaba engenazinkcukacha zongezelelweyo kwaye luphawu lwentengiso kuseto lwangoku lwekhitshi.
Ukutshintsha iingcango zakho zekhabhathi lelona nyathelo liphambili eliguqula ukubonakala kwakho kwikhabhathi yakho yasekhitshini kuba ilawula lonke useto lwekhitshi. Yinto yokuqala oyibonayo kunye nokwenza umbono olungileyo ngokusebenzisa iingcango zekhabinethi zekhitshi zangoku ziya kubonisa kwangoko i-vibe enesitayile ojolise ukuyiphumeza.
Ungathenga iingcango zekhabinethi esele zilungile ezenziwe kwiivenkile zokuphucula ikhaya kunye nabathengisi abakhethekileyo. Abenzi bekhabhinethi abaqhelekileyo benza kwakhona isitayela se-slab kunye neepaneli zeplati zecango zecango lekhitshi ngenani elincinci le- $ 15 ngeenyawo zenyawo.
Guqula ukugqitywa kwekhabinethi yakho yasekhitshini usebenzisa ii-veneers kunye ne-laminates. - Zintathu iindidi zezinto zokugqiba ezinokuthi umntu aziphengulule ukuze ahlaziye inkangeleko yeekhabhathi ezindala zekhitshi, ezizezi zinto zokuthambisa ukhuni, iiplamin laminates kunye ne-thermofoil eqinileyo. Ezi zinto zintathu zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokhetho lwemibala kunye nokukhethwa kwepateni, ukuvumela abaninimzi ukuba bakhethe uyilo oluhambelana ngokugqibeleleyo nesitayile sanamhlanje. Ngasinye kwezi zinto zikwanazo izinto zazo ezimbi nezinegalelo kumgangatho kunye nokuphila ixesha elide kwiikhabhathi zakho zasekhitshini.
Izithambisi zomthi zingaphantsi kwemilimitha ezi-3 izilayi ezomeleleyo zomthi ezisetyenziswa ngaphezulu komnyango wekhabhathi kunye nesakhelo sokubanika ubuhle bendalo obubodwa beenkuni zokwenyani. Yeyona nto ibiza kakhulu yokugqibezela iikhabhathi zasekhitshini kodwa eyenzela ukuzinza kwayo kunye nokomelela kwayo. Olu lolona khetho lubalaseleyo ukuba ufuna ukunika iikhabhathi ezindala zasekhitshini inkangeleko eyahlukileyo enobuhlobo bendalo kunye nobushushu bemithi. Ukufumana i-vibe yanamhlanje, zama ukusebenzisa i-veneers yangempela yeenkuni kunye nephethini yokugaya ngokuthe tye kwiikhabhinethi zakho ezindala. Kwakhona, khetha imibala emnyama. Ukufaka ii-veneers kwiikhabhathi ezindala zekhitshi kufuna isincamathelisi okanye kwezinye iimeko, inikezelwa kwixolo kunye nokunamathela okwahlukileyo okwenza umsebenzi ube lula ngakumbi.
Olunye uhlobo lokugqibela onokulusebenzisa ukuhlaziya ukubonakala kweekhabhathi ezindala zekhitshi ziiplastiki. Iiplastiki zeplastiki zenziwe ngamacandelo ezinto ezifakwe kwi-resins. Ihlala inendawo yokuhombisa ebonisa iipateni ezilinganisa izinto zendalo okanye ukugqitywa kombala ohlukileyo. Yenye yeekhabinethi ekhitshini ekhokelayo egqibezela kungekuphela i-aesthetics enegalelo kodwa nangenxa yokuba yomelele, inyamezele ukufuma kwaye ayipheli. Ukufaka ii-laminates ngaphezulu kweekhabhathi zekhitshi ezikhoyo kubandakanya ukufaka izinto kwisakhelo okanye kumnyango usebenzisa isigxina.
Iiplastiki zeplastiki ziyafumaneka kumakhulu okhetho. Iza ngokhuni olufana noyilo olubonisa ubuhle bendalo obukhethekileyo bokhuni lokwenyani. Kodwa enye yeendlela zayo ezahlukileyo ezifanelekileyo kakhulu ekudaleni iikhabhathi zekhitshi zangoku zii-High Gloss laminates. IiLaminates eziphakamileyo ezinobukhazikhazi zinobonakala obumenyezelayo kwaye zenza indawo egudileyo, egudileyo ebonisa ubuhle obuhle, obuhle. Xa uhlaziya inkangeleko yeekhabhathi ezindala zasekhitshini, yiya kwizilayidi eziphezulu ezimhlophe okanye ezimnyama. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukongeza isuntswana le-punch kwiskimu sakho sombala, khetha ii-laminates eziphezulu kwii-reds, i-lime eluhlaza, i-tangerine okanye i-blues edlamkileyo.
Phinda uphinde ugcine umbala ohlukileyo . - Ukulungiswa kunye nokugcinwa kwezona zilungiso zilula kwaye zikhawulezayo ukutshintsha umbala weekhabhathi ezindala zekhitshi. Ungazisa kwangoko iikhabhathi ezindala ngokubaphatha ngengubo entsha yepeyinti engathathi hlangothi okanye enesibindi. Nangona kunjalo, ukuba usafuna ukugcina ukubonakala komthi, yiya ngamabala emithi, kodwa ukhethe umbala omnyama njenge-wenge, i-espresso, ikofu okanye i-walnut emnyama. Olunye ukhetho lwepeyinti onokukhetha ukutshintsha iikhabhathi ezindala lube lolo lujongeka mnyama, mhlophe, ngwevu kwaye luhlaza njengemibala ebomvu, eluhlaza kunye neblues.
Ukuba ufuna ukujongeka okucekeceke kunye nomphezulu ogudileyo, ungaphonononga ukugqitywa kwepeyinti njengokuqaqamba okuphezulu okanye ukugqitywa kwepeyinti yeduco. Ukugqitywa kweduco kuya kuyifihla ingqolowa yendalo yeekhabhathi zakho zomthi ngokusetyenziswa kocwecwe lwepeyinti ekwenziweyo. Oku kuya kukunika iikhabhathi zasekhitshini ukujonga okubiza kakhulu kunye nokuziva okunethezeka. Nangona kunjalo, ukugqitywa kwe-duco kwiikhabhathi zasekhitshini kufuna iinkonzo zobungcali kwaye kunokuhlawula iindleko ezongezelelweyo ngokweendleko zabasebenzi.
Ukulungiswa kunye nokugcinwa kungenziwa njengeprojekthi ye-DIY usebenzisa izixhobo ezilula ezinjengezinto ezicocekileyo zokucoca, i-sandpaper kunye nebrashi yepeyinti. Lukhetho olufikelelekayo kakhulu kwaye aluthathi ixesha elininzi kunye nomzamo wokulufeza.
Yongeza ukufakwa kocango lweglasi kwiikhabhathi ezindala zomthi . - Ukuba ufuna ukubukeka okuthambileyo kwikhabhathi yakho yasekhitshini, ungazama ukubandakanya ukufakwa kweglasi kwizakhelo zeminyango. Ukusetyenziswa kwezinto ezixubekileyo kunika imeko yanamhlanje. Ukongeza ukufakwa kweglasi akupheleli nje ekuphuculeni iikhabhathi zasekhitshini ze-aesthetics kodwa ikwavumela ukuba ubonise i-dinnerware entle kwaye ikunike umbono wemixholo yekhabinethi yakho, ethetha ukuba izinto kulula ukuzibona xa uzifuna.
Ukongeza iglasi yokufaka kwiingcango zekhabhathi ezindala ikwayiprojekthi onokuyenza kwimpelaveki, ngaphandle kokuchitha imali eninzi. Kukho iindidi ezininzi zeepaneli zeglasi ezinokuthi umntu aziphengulule ukuze aguqule inkangeleko yekhabhinethi endala, enje ngeglasi ecacileyo, iglasi enefriji, egxunyekwe, eqhekekileyo, enemibala, epeyintiweyo kunye neglasi eneflit. Kulabo bafuna ukuthinta umbala, khetha iglasi yengubo yeglasi okanye iglasi ebhalwe ngasemva njengoko isiza kuluhlu olubanzi lokugqiba umbala. Okokugqibela, setha inkangeleko yeglasi yekhabinethi yeglasi yanamhlanje kunye nokusetyenziswa kwesibane sekhabhathi yangaphakathi.
Guqula izixhobo zekhabhathi ezindala ngokutsala kunye nokuphatha .- Sihlala sisiva ukuba izixhobo zekhabhathi zezobucwebe ekhitshini, kwaye nangona zincinci kakhulu iinkcukacha zoyilo, zibaluleke ngokulinganayo njengeekhabhathi zekhitshi ekudaleni ukuhlangana kunye nokujonga kakuhle ikhitshi lakho. Ukuthatha okutsha nangakumbi kokutsala ikhabethe, amaqhina kunye neziphatho, buyisela indawo yakho endala, ekruqulayo kunye nezixhobo ezibushelelezi, ezigudileyo ezinje ngemivalo ethe tyaba, izibambo zesinyithi ezingenasici, ii-wire pulls, bar bar, njl. ezingenanto yokuhombisa kwaye ukhethe ezo zikwi-satin e-brashi, ipolishiwe kunye nokugqitywa kwe-matte. Gwema i-antique, i-weathered okanye i-handles, kodwa endaweni yoko khetha i-chrome okanye insimbi engenasici.
Ukutshintsha iikhabhathi kutsala kunye nokuphatha yindlela efikelelekayo kakhulu yokwenza iikhabhathi ezindala zikhangeleke ngakumbi. IKhabinethi iyatsala kwaye iphathe ngokwesiqhelo isixa esiyi- $ 2 ukuya kwi- $ 4 ngesiqwenga ngasinye, kodwa inokuya kwi- $ 20 ukuya kwi- $ 50 ngesiqwenga ngasinye sehardware ephezulu. Ungaphonononga okuninzi kwezi zixhobo zasekhitshini zekhitshi zale mihla kwiivenkile zokuphucula ikhaya, iidepho zasekhaya okanye abathengisi abakhethekileyo.
Faka ukukhanya kwekhabhinethi . - Izibane ezilungileyo zekhabhinethi zingenza umahluko obonakalayo kwaye ikwayinxalenye ebalulekileyo yoyilo lwangoku lwekhitshi. Izibane zangaphakathi zekhabhinethi kunye nokukhanyisa kwikhabhathi akuncedi kuphela ekufikeleleni kodwa zikwaphucula imeko yekhitshi lakho. Izibane zomsebenzi zinokongezwa ngokulula phantsi kweekhabhathi ezingaphezulu okanye phantsi kweeshelfu ezivulekileyo ukubonelela ngokukhanya okongeziweyo xa kufezekiswa umsebenzi wokulungiselela ukutya kunye neminye imisebenzi ekhitshini. Izibane zekhabhinethi zangaphakathi zikunceda ukuba ujonge ngokulula into oyifunayo ngaphakathi kwiikhabhathi. Unokusebenzisa izibane ngotshintsho olucekeceke ukuze ukhanyise ngendlela ebonakalayo enokukunceda usete imeko ekhitshini lakho.
Umthi we-oki uyintandokazi kwindawo yoyilo ekhitshini. I-hue etyheli yegolide isetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwiikhikhitshi ezinomtsalane wendabuko onje ngomsebenzi wobugcisa, iikhitshi zelizwe kunye neekhitshi zasendlini. Ngokubanzi, imithi ye-oki ine-rustic vibe kwaye ngamanye amaxesha inokujonga ngaphandle kwendawo kwimeko yanamhlanje. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba iikhabhathi ze-oki zasekhitshini azinakusetyenziselwa ukwenza inkangeleko ehlaziyiweyo ngakumbi yekhitshi lakho.
Ngaphandle kokubeka isimbo esixhaphakileyo seengcango zakho ze-oki zekhabhinethi ekubhekiswa kuyo, unokutshintsha ngokulula ukubonakala kweekhabhi zekaki ze-oki ezindala zibe zezala maxesha ngokutshintsha umbala. Ukutshintsha umbala kunokwenza umahluko omkhulu njengoko kunceda ukuba wenze umbala wombala omtsha ohambelana nesitayile sangoku sekhitshi.
Nazi ezinye zeendlela zokwenza iikhabhathi ze-oki zikhangeleke zangoku:
Nika iikhabhathi ze-oki ukugqiba okutsha usebenzisa ibala leenkuni -Ukuba usithi hlaziya, kufuneka utshintshe umbala kwiikhabhathi ze-oki ngokupheleleyo kunokuba uyibuyisele kwindawo yayo yoqobo. Sukugcina umbala ofanayo we-oki yegolide kodwa endaweni yoko zama ukukhangela umbala okhoyo okhoyo wokhuni okhoyo ngoku ukuze ujongeke. Khetha umthunzi omnyama njengoko ihlala yenza i-vibe yanamhlanje. Khetha i-espresso okanye i-walnut emnyama. Ngaphandle koko, ibala elimnyama lolunye ukhetho olulungileyo. Kunqande amabala emithi aneetoni ezityheli, orenji kunye nobomvu njengoko zijongeka ngathi ziphelelwe lixesha kwaye azihambelani nesimbo sanamhlanje.
Ukugcina iikhabhathi ze-oki kubandakanya ukusongela ubuso bekhabhathi, ucango kunye nezakhelo emva koko ufake idyasi yebala lejel. Ukuhamba mnyama ngokombala wokuqala wekhabhinethi kulula ukukhupha xa kuthelekiswa nokuhamba ngokukhanya. Ukuba ufuna ukujongwa okungaguquguqukiyo kunye nomgangatho ophezulu, yishiyele kwiingcali endaweni yokuba uzenzele ngokwakho iprojekthi.
Hlaziya usebenzisa ipeyinti - Unokuphinda ugqume ngokupheleleyo ipateni yokugcoba iikhabhathi zekhitshi ze-oki kwaye uyigubungele ngengubo entsha yepeyinti. Lahla loo mthi ujongeke ngokupheleleyo kwaye endaweni yoko ube nesibindi kwaye uvavanye ukutshiza kombala omtsha. Khumbula, olunye lweempawu zophawu lwentengiso lweekhabhathi zekhitshi zale mihla kukuba zijolise kwimibala engathathi hlangothi okanye imibala enempilo. Unokukhetha kumhlophe, mnyama, ngwevu ukuba ufuna umbala ongasekiyo ongasekiyo. Kodwa ukuba ufuna iikhabhathi zakho zasekhitshini ziphume kwindawo, jonga ukubomvu okuqaqambileyo, imifuno eqaqambileyo, umbala ophuzi welanga kunye neblue blues.
Nantsi ividiyo malunga nendlela yokutshintsha iikhabhathi ze-oki eziphelelwe lixesha uyilo lwekhitshi olujongwe ngakumbi:
Ukupeyinta iikhabhathi zekhitshi ze-oki kunokufuna amanyathelo amaninzi. Injongo yakho yokuqala kukunciphisa iinkozo kangangoko kunokwenzeka ngokusetyenziswa kokugcwaliswa kweenkozo zomthi kunye neebhatyi ezininzi zokuqala. I-primer isetyenziswa emva kweekhosi ezininzi zokucoca, isanti kunye nokulahla. Ke emva kokuba isicelo sokuqala sisetyenzisiwe, ngoku ungafaka umbala wepeyinti owufunayo usebenzisa ibrashi yepeyinti, ibrashi yokuhambisa okanye okungcono, umpu wokutshiza okanye icompressor yepeyinti.
Ungazifihla njani iinkozo zendalo zomthi wom-oki ukubanika inkangeleko yokuhlaziywa ngakumbi?
Zininzi iindlela zokufihla iinkuni zendalo zeekhabhathi ze-oki. Isikhokelo esikhawulezayo sokukhumbula kwipeyinti ye-oki yekhitshi kukuba i-shinier okanye i-glossier ipeyinti yakho, iyabonakala ngakumbi ingqolowa yendalo ye-oki, ke khetha inani elifanelekileyo le-sheen, kwaye ukuba kunokwenzeka, thintela ukugqitywa okuphezulu ukufezekisa ikhabinethi ekhitshini ekhangeleka njengangoku. Olunye ukhetho lokunciphisa iinkozo zomthi we-oki kukusebenzisa isalant seal. Isitywina somgangatho ophezulu wentlabathi sinceda ukugcina ukopha dorm ngokophahla kunye ne-primer. Unokusebenzisa kwakhona ukuzalisa ingqolowa yomthi okanye i-putty kule njongo. Kwakhona, unokuqinisekisa ukubonakala okungaguquguquki kunye nokugqiba ngoncedo lweengcali.
Ukujongana neekhabhathi zakho ze-oki ngesixhobo esitsha . Ukugqibezela inkangeleko entsha yeekhabhi zakho ezindala ze-oki, nyusa uyilo lomnyango wekhabhathi yakho usebenzisa izixhobo ezicocekileyo nezilungisiweyo. Izixhobo zekhabhathi ezindala ngokuqinisekileyo ziya kujongwa ukuba ufuna ukuguqula ngokupheleleyo ukubonakala kweekhabhathi ze-oki eziphelelwe lixesha.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, yiya kwimivalo ethe tyaba, tsala imivalo, izibambo ezineshubhu okanye utsalo ngocingo- zonke zibonisa imigca ecocekileyo kunye noyilo olungafakwanga. Yiya ngemibala ebukhali kwaye uphulukane nesiphelo esigqibeleleyo ngokukhetha i-satin e-brashi, i-chrome e-polished okanye izibambo zentsimbi engenasici. Khangela izibambo eziqhuba isibhakabhaka esipheleleyo sekhabhinethi okanye ubude bedrawer njengoko zinika imigca ebonakalayo.
IKraftmaid -I-Kraftmaid lolona hlobo ludumileyo lwekhabhathi zasekhitshini kwaye iyenze yaphawula iminyaka engama-40 yamava ekwakheni iikhabhathi ezikumgangatho ophezulu.
I-Kraftmaid yaziwa ngokuvelisa iikhabhathi zasekhitshini kwaye inikezela ngesiko kunye nekhabhathi eyenziwe ngokwesiko. Iikhabhathi zayo zasekhitshini ziyafumaneka ngokubanzi kwiivenkile zokuphucula ikhaya kunye neendawo zokugcina ikhaya.
I-Kraftmaid ivelisa iintlobo ezahlukeneyo zekhabinethi zekhitshi kunye noyilo, ukusuka kwindabuko ukuya kwixesha langoku kunye nelangoku. I-Kraftmaid inikezela ngeendlela ezahlukeneyo xa kufikwa kwikhabhathi yekhitshi, enezinto ezingama-65 zokugqiba, izitayile zeminyango ezili-100 kunye nezisombululo ezingaphezu kwama-200 zokugcina. Xa kuziwa kwimathiriyeli, basebenzisa umgangatho ophezulu wokhuni oluqinileyo njenge-oki, icherry kunye nemephu. Iikhabhathi zasekhitshini zesitokhwe seKraftmaid ziyafumaneka kwi-rack ngexabiso elifanelekileyo, zivumela abaninikhaya ukuba bakhe ikhitshi lokuqala elisebenza ngokupheleleyo ngaphandle kokuphazamisa ubuhle balo. Isiko labo kunye nokwenza kwabo ngokwesiko kuvumela ubhetyebhetye obupheleleyo xa kufikwa kuyilo lwekhabhathi yekhitshi.
I-Kraftmaid ivelisa iikhabhathi zekhitshi zangoku zineengcango zomnyango wesakhiwo kunye noyilo lweplanethi ethe tyaba. Banikezela ngezinto zokugqibela zale mihla ezinje nge-thermofoil enombala omhlophe. Olunye ukhetho lokugqibezela oluvela eKraftmaid olukulungeleyo ukwenza isitayile sangoku kukugqitywa kwepeyinti kunye nokupeyinta ngokugqitywa kweglaze. Imibala ye-Kraftmaid ehambelana nekhabhathi yekhitshi yobuhle yanamhlanje yi-Greyloft, Midnight, Onyx, Pebble Grey kunye ne-Moonshine. Unokukhetha imibala ecwecwe njenge-Greyloft ene-Sable glaze, ezinzulwini zobusuku kunye ne-Onyx glaze, Pebble Grey kunye neCocoa glaze kunye neMushroom eneCinder glaze.
ISnaidero eMelika -I-Snaidero i-USA ibizwa ngegama le-CEO kunye nomsunguli wayo u-Dario Snaidero. Kuyaziwa ngokuvelisa isiphelo esiphezulu, isimbo saseYurophu iikhabhathi zekhitshi kwimarike yaseMelika. Iikhabhathi zekhitshi laseSnaidero zibandakanya ubunewunewu banamhlanje kwaye zibonakaliswa ngumtsalane wazo ococekileyo kunye nesitayile.
Iikhabhathi zekhitshi laseSnaidero zenziwe ngabaqulunqi kunye nabayili bezakhiwo abaneminyaka yobungcali kubuchwephesha bobugcisa bekhabhathi, yiyo loo nto unokuqiniseka ukuba iimveliso zabo zinemigangatho ephezulu kakhulu. Uyilo lwabo luyilelwe ngokukodwa iimfuno zabathengi kunye nezinto abazithandayo, baqinisekisa ukuba uyilo ngalunye lwekhitshi luyingqayizivele kwaye luphelele ngokwabantu.
ISnaidero ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo kunye neempawu, ezivela kwiindidi zokugcina, izixhobo kunye nemibala. Basebenzisa uluhlu olubanzi lokugqitywa kwekhabinethi kunye nezinto ezinjengokhuni oluqinileyo, i-laminate, i-melamine, iglasi ebengezelelweyo okanye yesatin. Olunye ugqibe olwahlukileyo abalwenzayo lacquering efumaneka kwimibala ebanzi yemibala. Ukongeza koko, banokwenza imibala yesiko ukuba unomthunzi othile owunqwenelayo. Bangathatha nawuphi na umbala wePantone kwaye bayisebenzise kwiikhabhathi zasekhitshini.
Xa kuziwa kuyilo lwekhabhathi, bayazingca ngeenkcukacha zabo ezinje ngezibambo ezivalelweyo okanye iindlela zokuchukumisa ezithambileyo. Uyilo lwekhabhathi yekhitshi lwanamhlanje lubandakanya iingcango zesitayile esineeprofayili ezintle kwaye akukho zibambo. Banikezela ngoyilo lwasekhitshini olutyikityiweyo oluphezulu kunye nolwanamhlanje.
Merillat -I-Merillat ikwayenye into eyaziwayo ekhitshini eyakha ikhitshi. Yinkampani esekwe eMichigan, engumnini kaMaso, umnini omnye weKraftmaid kunye neMill's Pride.
I-Merillat ivelisa uluhlu olubanzi lwesitayile sekhabhathi yekhitshi, imibala kunye nokugqitywa. Kodwa ezona zilungeleleneyo ngobuhle banamhlanje ziiMerillat Classic Lanielle Square, Merillat Classic fusion, Merillat Masterpiece Glencoe Square kunye neMerillat Masterpiece Epic, eziziingcango zekhabhathi yesitayile. Nangona kunjalo ukugqitywa okuveliswa nguMerillat ubukhulu becala kufana neenkuni kunye neyona mibala ibalaseleyo onokuyifumana kwiikhabhathi zekhitshi zale mihla yimithi yazo emnyama, emnyama nomhlophe.
IKEA -Wonke umntu uyazi kakuhle i-IKEA kuba yaziwa njengebhokisi yefenitshala enkulu kunye nomthengisi wezinto zokuthenga ekhaya. I-IKEA ithandwa ngokwenza lula ukudibanisa ifanitshala. Ayibalulekanga kwikhabhathi yekhitshi, kodwa kufanelekile ukuba ikhankanywe kuba yeyona nto isasaza kakhulu iikhabhathi zasekhitshini esele zilungisiwe.
I-IKEA ibonelela ngeendlela ezinamaxabiso aphantsi kwikhabinethi yanamhlanje yasekhitshini. Benza iintlobo ngeentlobo zoyilo kodwa uninzi lwazo lulungele imeko yangoku neyangoku. Uya kumangaliswa yindlela entle ngayo iikhabhathi zekhitshi zangoku kwi-IKEA. Ziyilo ezingenasiphelo, uhlobo lweengcango zekhabhathi kunye nokuphatha iingcango zasimahla. Ngelixa ukugqitywa kunokuhamba naphi na ukusuka ekukhanyeni ukuya kumthi omnyama, ukungathathi hlangothi njengamnyama, omhlophe kunye nokungwevu okanye ukuqaqamba okugqibelele. Iikhabhathi zasekhitshini ze-IKEA zikwakhona kwiidizayini zokufaka iglasi. Ezi khabhathi zihlala zikhetha isitokhwe kwaye ziza ngobukhulu obuqhelekileyo obuqhelekileyo Izinto ezinkulu ezinokuthi zenziwe ngezixhobo, ukugqiba, umbala kunye nezixhobo zehardware zivumela igumbi lokudibanisa kunye nokuthelekisa ukwenza uyilo olusebenzayo kunye neendleko ezifanelekileyo zekhitshi langoku.
I-Aran Cucine -I-Aran yase-USA lisebe le-Aran World, umenzi owaziwayo wokuphela kwekhabhinethi yase-Itali. I-Aran Cucine yinto eyaziwayo, ekhokelayo, eyinkampani yosapho ekudaleni iikhabhathi zekhitshi ezisulungekileyo kwaye baneminyaka engama-60 yobungcali obuphezulu bobugcisa base-Italiya ukubuyisela oko. Iikhabhathi zazo zonke zingeniswe zivela e-Itali kwaye zathembisa ukuba kuphela kwezona zixhobo zintle kunye nolwakhiwo olulungileyo.
I-Aran Cucine ibonelela ngemigca engama-30 eyahlukeneyo ekhitshini kwaye bavelisa iikhabhathi zekhitshi ezifanelekileyo isitayela sendabuko, esangoku nesangoku. Kodwa zivelisa iikhabhathi zekhitshi zaseYurophu ezibalaseleyo ezinokulingana ngaphandle komthungo ngaphakathi ngaphakathi ngaphakathi. Ezi khabhathi zekhitshi zale mihla zinembonakalo engacacanga efanelekileyo yokuyila uyilo lwekhitshi oluncinci oluphefumlelweyo.
I-Aran Cucine ibeka phambili kubuhle, umgangatho kunye nokusebenza. Benza ngokwesiko ukuba bonke uyilo lwabo lwanele iimfuno ezithile zabaxumi babo. I-ARAN Cucine ibonelela ngekhulu lokudityaniswa kombala kunye nokugqitywa okubandakanya ukukhanya kunye nomthi omnyama, ukungathathi cala kunye neempawu ezivakalayo. Iikhabhathi zazo zangoku zasekhitshini zinokuba nembonakalo egudileyo okanye indawo ebonakalayo ebonakalayo enokuthi okanye ingafiki nge-sleek, izixhobo ezilungelelanisiweyo. Olunye uyilo lwentengiso abanalo baphatha iingcango zasekhitshini zasimahla zasimahla ezinomthungo kunye nokudityaniswa okudibeneyo.Enye ibhonasi eyongeziweyo evela kwiikhabhathi zasekhitshini zeARAN kukuba banika iwaranti yeminyaka eli-10 - eyona inde kakhulu enikwa kwishishini lekhabhinethi yasekhitshini.
Ndwendwela eli phepha ukuze ubone igalari yethu Uyilo lwekhabhinethi yasekhitshini izimvo nangakumbi kwisithuba sakho.
iingoma zomtshato wokuqala ilizwe
iilokhwe ezimnandi zokunxiba umtshato wasehlotyeni
Ngaba ufumana isipho kwitheko lothethathethwano
amakhonkco omtshato ngasekunene